विश्वकपका बहानामा विकृतिः सामाजिक सद्भाव किन बिथोल्ने? | Suvadin !
विश्वकपका बहानामा विकृतिः सामाजिक सद्भाव किन बिथोल्ने?
लगभग डेढ महिना चल्ने यस गेमको बहानामा दिनदिनै निन्द्रा बिगारेर यसरी कराउने हो –हल्लाले अरुलाई भन्दा बढी आफैँलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विभिन्न किसिमका शारीरिक समस्याहरुले मानिस लाई अझ अल्छि, आलश्यता बनाउँदै छ विभिन्न मुटुरोगी, सुगर, रक्तचाप जस्ता रोगहरुले समाइरहेको छ। समयमै नसुत्नाले सुत्ने समयको गढबढीका कारण यस्ता समस्या देखा परेको भनाई चिकित्सकहरुको रहेको छ।
Jun 28, 2018 20:07
Shared: 62 times | Share this on
रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको प्रभाव नपर्ने कमै होलान्। संसार नै विश्वकपमै भएको बेलामा नेपाल नहुने कुरै भएन। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकपले ठूलो प्रभाव पारेको छ। साना–साना बालबालिकादेखि जेष्ठ नागरिकको मुहारमा पनि खेलको उत्साह देख्न सकिन्छ।
अझ विशेष गरेर नेपाली युवा वर्गमा यसको ठूलो के्रज रहेको देख्न सकिन्छ। नेपाली फुटबलप्रेमीहरु रुसमा भइरहेको विश्वकपका लागि रातभरि निन्द्रा बिगारेर आफ्नो कामकाज, दैनिक क्रियाकलाप बिर्सेर फरक–फरक टिमको पक्ष लिएर रमाइरहेका छन्। कलेज, अफिस, क्याफे सबैतिर एक अर्काबीच विश्वकपकै बहस चल्ने गर्दछ। यसको फ्यान, यसले जित्यो, उसले हार्योभन्दा नि जित्नैपर्छ, पक्का जित्छ, खेल्न जानेन् जस्ता तर्कहरु व्यक्त गर्ने तनाव लिनेहरु नेपालीहरुको ४–४ वर्षमा हुने गरेको विश्वकपले रौनक ल्याएकै छ।
साथमा यसबाट सकारात्मक सँगसँगै नकारात्मक प्रभाव पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ। परराष्ट्र सम्बन्ध मजबुद हुनुका साथै खेलप्रतिको लगाव बढ्नु, कहिल्यै खेलप्रति रुची नहुनेहरुमा विश्वकपको रुचीलाई यसको सकारात्मक पक्ष नै मान्न सकिन्छ। नेपालमा विश्वकप खेल्ने राष्ट्रको झण्डा, विश्वकप खेल्ने देशको जर्सीले पसल बजार भरिएका छन्। जसको कारण व्यापारीहरुलाई व्यापारबाट अत्यधिक मात्रामा लाभ भएको छ। यो एउटा राम्रो कुरा हो। तर, भई–नभई अरुको देखासिकीमा विश्वकपको लागि गरिने खर्चले भने अनावश्यक देखिन्छ।
नेपालमा विश्वकपले सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ। विभिन्न टिमको पक्ष लिएर आफ्नै घर परिवार, टोलटोलमा झै–झगडा गर्ने, खेल हेर्ने बहानामा विभिन्न खालका लागुपदार्थ, मद्यपान, धुम्रपान जस्ता पदार्थहरु सेवन गरेर होहल्ला गर्ने लगायत सानासाना स्कूल जाने बच्चाहरु समेत रातभर नसुत्ने तथा आफ्नो मनपर्ने खेलाडीले गोल हान्न सकेन, मनपर्ने टिम बाहिरिए भन्दै तनाव लिने गरेका छन्। जसका कारण विभिन्न खालको शारीरिक समस्याहरु आइपरेका छन्। निन्द्रा नलाग्ने, पढ्न मन नलाग्ने, काममा झर्को लाग्ने जस्ता समस्या विश्वकपका क्रेजी फानहरुमा प्रत्यक्ष देखिएको छ।
विश्वकपले सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई गाउँ इलाकामा पनि प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा चहलपहल, उत्साह रौनक थपिँदै गएको छ। आफ्नो पक्षले जितेमा रमाउने, हारेमा निराश हुने खेलप्रेमीहरु पनि नेपालमा थुप्रै छन्।
खेलमा रमाउन अनि खेललाई मन पराउनु गलत कुरा होइन, खेल एउटा मानिसको जीवनको अभिन्न अङ्ग पनि हो। यसले मानिसलाई मनोरञ्जन साथसाथै ज्ञान विकासमा अझ प्रगाढ बनाउँछ। विश्वकप एउटा उत्कृष्ट प्रतियोगिता पनि हो, विश्वसामू विश्वकपको छुटै विशेषता रहेको छ। तर, विश्वकपको बहानामा नेपालीहरुले दैनिक घटाउने घटना निकै गलत कुरा हो। खेल शुरु हुनु महिनौं अघिदेखि विभिन्न टिमको पक्ष लिएर होडबाजी लगाउनु, एक पक्षले अर्को पक्षको विरोध गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा जथाभावी शब्दहरुले एक अर्कोमा गाली, बेइज्जती गर्नु भनेको एकदमै नराम्रो प्रभाव हो। आफु रातभरि नसुत्ने, सुत्नेहरुलाई हल्ला गरेर अवरोध गर्ने कार्य त यसै नराम्रो भयो।
रुसमा भइरहेको विश्वकप जिताउन नेपालीहरुले गरेको यस्तो हर्कतले निकै नै चर्चा कमाइरहेपनि यसको नकारात्मक पक्ष बढिरहेको छ, विकृतिहरु बढ्दो छ। होला, प्राथनाले नै विश्वकप जित्न सक्ला। तर, भगवानको विश्वासका लागि मानिरहेको धर्ममा आक्षेप लगाउने, धर्म परिवर्तन गराउने यस्तो धर्मले गरेर विश्वकप हारेको भन्दै धर्मलाई दोष दिनु साथै नेपालमा बसी खेल खेल्ने खेलाडीहरुमा एकअर्काको नाम बिगारेर विभिन्न खाले पोष्ट गर्नु नेपालीहरुको मुर्खता पनि हो।
खेलमा हारजीत अवश्य हुन्छ, एउटा टिमले जिते अर्कोले अवश्य हार छ यसमा टिमले जित्यो भनि हार्ने पक्षहरुमा देखिएको कमजोरीलाई विविध तरिकाले व्यक्त गरिरहेका छन्। जसले नेपालमा विश्वकप खेल्ने अन्य देशका बारेमा नराम्रो असर परेको छ। नेपालमा विश्वकप शुरु भए यता यस्ता समस्याहरु पनि बढिरहेको देखिन्छ। आफ्नो टिमले हार्यो भनेर गलत गर्ने प्रयास भएको पनि देखिन्छ।
पहिलो विश्वकपमा जुन टिमले जित्यो उही टिमले यो विश्वकप जित्छ भन्न सकिन्न। जसले जितेपनि हामीलाई राम्रै हो। विभिन्न टिमको विरोधमा उत्रेर आ–आफ्नै साथी, घर परिवारमा झगडा गर्नु नेपालीहरुको बेकुफी पनि हो। जब जुन देशले गेम खेल्दै छन्, उक्त देशले समेत यस्तो बेवकुफी देखाउँदैन भने हाम्रो देशमा यस्ता विकृति किन भित्रिरहेका छन्? यसरी भित्रिएको विकृतिले के नेपाली समाजमा सकारात्मक परिर्वतन होला त? विश्वकपकै बहानामा नेपालमा यस्ता नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित सबैले सोच्नु आवश्यक देखिन्छ।